"1 Dia namaly Joba ka nanao hoe: 2 Efa nandre zavatra maro toy izany aho; Mpampionona mahasorisorena foana hianareo rehetra. 3 Efa tapitra va izay ny bedibedy foana? Sa mbola misy manesika anao hamaly ahy ihany? 4 Izaho kosa mba mahazo miteny tahaka anareo, raha mba tonga tahaka ahy hianareo; eny, mahazo manamboatra teny ho enti-mamely anareo aho ary mahazo mihifikifi-doha aminareo; 5 Mahazo mampahery anareo amin’ny vavako aho, Ary mahazo mampitony ny alahelonareo ny fampiononana ataon’ny molotro. 6 Na dia miteny aza aho, dia tsy mitsahatra ny alaheloko; Ary na dia mangina aza aho, dia tsy misy mihena izany. 7 Fa ankehitriny efa nandreraka ahy Izy; Naringanao ny ankohonako rehetra. 8 Ary efa nampifezaka ny tenako Hianao, ka dia vavolombelona amiko izany. Ary mitsangana hiampanga ahy ny fahahiazako, ka dia tondromaso akaiky izany. 9 Amin’ny fahatezerany no amiravirany sy andrafiany ahy, mihidy vazana amiko Izy; Eny, miseho ho fahavaloko Izy ka mampivandravandra ny masony amiko; 10 Nisanasana vava tamiko ny olona; Latsa no nentiny namely ny takolako; Mitambatra hamely ahy izy. 11 Efa voatolotr’Andriamanitra ho amin’ ny ratsy fanahy aho, ary natsipiny ho eo an-tànan’ny mpanota. 12 Tamin’ilay izaho tsy nanana ahiahy iny, dia nanorotoro ahy Izy; Nosamboriny tamin’ny hatoko aho ka nomontsaniny, sady natsangany ho marika hokendreny. 13 Manodidina ahy ny mpandefa zana-tsipìkany; Mamaky ny voako Izy ka tsy miantra ary manidina ny aferoko ho amin’ny tany. 14 Bangabangainy lalandava aho, ka miroatra hamely ahy tahaka ny lehilahy mahery Izy. 15 Lamba fisaonana no voazaitrako hanarona ny hoditro, ary nalàko baraka tamin’ny vovoka ny tandroko. 16 Ny tavako tera-menan’ny fitomaniana, ary eo amin’ny hodi-masoko ny aloky ny fahafatesana; 17 Kanefa tsy misy eto an-tanako izay mba nalaina an-keriny; Ary madio ny fivavako. 18 Ry tany ô, aza manarona ny rako, ary aoka tsy ho voahazona ny fitarainako! 19 Fa na dia ankehitriny aza, indro, any an-danitra ny Vavolombeloko, eny, ny Vavolombeloko dia any amin’ny avo. 20 Na dia mihomehy ahy aza ny sakaizako, dia mamarin-dranomaso eo anatrehan’Andriamanitra kosa aho, 21 Mba hanamarina ahy olombelona eo anatrehany Izy sy hanafa-tsiny ahy zanak’olombelona amin’ny sakaizako. 22 Fa rehefa lasa ny taona vitsy, Dia handeha any amin’ny làlana izay tsy hiverenako intsony aho." Joba 16:1-22
Mpampionona mahasorisorena (1-5). Misarika ny sain’ireto namany hipetraka eo amin’ny toerany i Joba. Mba hahazoana tsara ny manjo ny hafa, dia mila mahatsiaro miaina ao anatin’izay iainany koa (Hebreo 13:3). Nahatsapa ny vesatry ny fahorian’ireo olona nositraniny i Jesosy Kristy, ary efa nandalo tamin’izay fahoriana mety hanjo antsika (Isaia 53:4). Izany no tena namana, miezaka mahatsapa ny manjo, mampahery, manohana, eo foana amin’ny fotoana rehetra. «Izay te-ho be fitiavana dia manaron-keloka; Fa izay mamohafoha teny mampisaraka ny tena mpisakaiza… Izay tena sakaiza tokoa dia tia amin’ny andro rehetra, sady miseho ho rahalahy hamonjy amin’ny fahoriana.» (Ohabolana 17:9,17). Raha mibedibedy foana dia mahasorena sy manampy ny alahelo indray.
Mafy loatra ny manjo (6-17). Mahatsiaro ho voa mafy i Joba fa ny fahatezeran’Andriamanitra nitambesatra taminy, ny olona koa etsy andaniny nampahory azy fatratra (7-10). Ny vadiny efa namporisika azy hiala amin’Andriamanitra (2:9). Izany rehetra izany manjo azy nefa tsy nisy tsi-rariny teo aminy. Iza intsony tokoa moa izany no antenainy? Indraindray tokoa mahatsiaro ho irery isika, toa manohitra antsika avokoa ny olona sy ny zavatra rehetra, manontany tena isika hoe inona ny fahadisoana nataoko? Inona no atao manoloana izany?
Mitady ny famindrampon’Andriamanitra (18-22). Tonga saina Joba ka mbola nitaraina tamin’Andriamanitra ihany na dia nahatsiaro hoe nasiany aza. Niasa tao anatiny Andriamanitra ka takany fa ao Aminy ihany no misy famindrampo. Efa niharan’izany fandaozana sy fampahoriana izany koa Jesosy Kristy, tamin’ny nanamelohana Azy tsy ahoan-tsy ahoana sy nafoy nandritra ny ora telo teo amin’ny hazofijaliana (Matio 27:46). Ny ràny latsaka no manavotra ny mino (18) ary izany no fanamarinana nandrandrain’i Joba (21).